Midowga Afrika oo wakiil usoo magacawday Soomaaliya kadib cayrintii Simon Molunga | Warbaahinta Ayaamaha
Midowga Afrika oo wakiil usoo magacawday Soomaaliya kadib cayrintii Simon Molunga
MUQDISHO-AYAAMAHA-Guddoomiyaha midowga Afrika ayaa Marwo Fiona Lortan u magacaabay inay noqoto ku xigeenka wakiilka midowga Aftika ee Soomaaliya.
Haweenaydan ayaa la sheegay in ay si weyn uga qayb qaadan doonto ballanqaadka midowga Afrika ee xaqiijinta qorshaha kala-guurka ee AMISOM iyo howlgalka cusub ee Midowga Afrika si loo helo xasillooni waarta iyo amni ka dhasha Soomaaliya.
Midowga Afrika ayaa shirkooda uga socda magaalada Addis Ababa ku taageeray kuna soo dhoweeyay isbeddelka lagu sameynayo howlgalka AMISOM.
Haweenaydan ayaa lagu beddelay Simon Malungo oo ahaa ku xigeenkii hore wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, kaas oo Soomaaliya laga cayriyay kadib markii lagu eedeeyay inuu dambiyo ka geystay dalka.
Ku xigeenkii hore Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Molunga ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay inuu isku dayay inuu marin habaabiyo baaritaanka dadkii Soomaaliyeed ee Ciiddamada AMISOM ku xasuuqeen degaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha hoose iyo arrimo kale.